साथी भेट्न गएका प्रविणलाई साथिलेनै मा’रेर झाडीमा फाले! ‘बचाउ’ भन्दै रुँ’दा कसैले हेरेन (भिडियोसहित)
April 27, 2020 2971
भानु नगरपालिका वाड नं १ निवासी प्रविण गुरुगं पोखरा’मा अध्ययन गर्थे । लकडाउनका कारण उनी भानु नगरपालिका स्थित घरमा आएका थिए । घरमा आएको बेलामा उनी आफ्नो साथिहरु’संग रमाइलो गर्न गएका थिए ।
साथीहरु त्यहाँ स्थित थापा फ्रेस आउसमा बसेर खाजा खाएका थिए । त्यो कुरा स्थानिय’ले पनि देखेका थिए । खाजा खाँदै साथीहरु’संग बसेका प्रविणको उनै साथिसंग झ ग डा भयो । सामान्य वि वा दका कारण वर्ष २१ का प्रविणले अनाहकममा ज्या’न गुमा’उनु परेको छ । फ्रेस हाउसवाट करिब एक किलो मिटर पर प्रविणको श व फेला परेको हो ।
वैशाख ९ गते भएको यो घ टना को बारेमा अहिले प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । ‘त्यतीबेला दिन हावाहुरी आएर रुढ ढ ला एका कारण बत्ती पनि थिएन ।
संधै खाजा खान युवाहरु आउँथे स्थानिय एक महिलाले भनिन्, अन्दाजी ७ जना जति थिए होलान । हो हल्ला त हामीले सुनेको हो । तर संधै त्यस्तै हल्ल गर्थे । त्यसैले हामीले वास्ता गरेनौं ।
जुन होटलमा खाजा खान गएका थिए सोही होटल सञ्चालिकाले उनीहरुले लोकल र क्स खाएको अवस्थामा आफुले देखे को बताइन् । उनले ८.३० वजे तिर त्यही मध्यको एक जनाले नराम्रो बोली बोल्न थालेपछि प्रविण ले त्यसो नबोल्नु भनेर सम्झाए ।
प्रविणले होटल मालिकलाई पनि हामी साथी हो बाहिर खाएर आएका छौं दुख नमान्नुहोला भन्दै भनेका थिए । त्यतीकैमा उनीहरुबीच विवाद सुरु भयो । प्रविणले नराम्रो नबोल्नु भनेर भन्दा साथीले नमानेपछि उनी एक्लै तल झरेका थिए ।
उनीहरुबीचमा त्यस्तो नराम्रो झ ग डा भएको भने आफु हरुले नदेखेको बताइन् । उनले आफ्नो पसलमा ५ जना आएको बताइन् ।सो टोलको आसपासमा रहेका अन्य स्थानि यले पनि केही बेर ह ल्ला आएको सुनिएको भए पनि आफु हरु बुझ्न नगएको बताएका छन् ।
स्थानिय एक महिलाले संधै नास्ता पसलमा युवा हरु खान आउने र हल्ला गर्ने गरेका कारण संधै जस्तै घ ट ना होला भनेर स्थानियले वास्ता गरेनन् । प्रविणले ‘बचाउ-बचाउ’ भनेर कराएको स्थानिय गाउँलेले पनि सुनेका थिए । तर युवाहरुले झ ग डा गरेका होलान् भनेर कसै ले वास्ता गरेनन् ।
अर्का एक पुरुषले पनि हल्ला र आवाज आएको सुनेको भएपनि आफुहरुको परिवारले वास्ता नगरेको बताए । करिब राति ८ देखि ९ वजेको बिचमा युवा हरुले हल्ला गरेको र बचाउ भनेर क राएको सुनेको बताए ।
‘सँधै यस्तै हल्ला हुन्थ्यो, त्यही भएर हामीले वास्ता गरेनौं, ति पुरुषले भने, मेरो छोराले ह ल्ला सुनिएको छ भन्यो तर हामीले संधै यस्तै हल्ला हुन्छ सुत भनेर मैले नै भने ।’ उनीहरुले यति ठूलो घ ट ना होला भन्ने आफुहरुले अनु मान नै नगरेको बताए ।
प्रविणको बहिनीले दाई जहिले पनि पोखरा वाट आउँदा साथीहरुसंग जाने र केही ने केही घ ट ना हुने भएकाले त्यो दिन पनि आफु हरुले निकै वेर जान नदिएको रोकेको बताइन् ।
लुगा लगाएर २ घण्टा घरमै बस्यो, हामीले जान दिएका थिएनौं, उनले भनिन्, उतैवाट कपाल बनाएर आएको रहेछ । मेरो दाईले मलाई ब चाऊ भने गुहा:र माग्दा पनि कसैले सहयोग गरेन । भि डियो हेर्नुहोस
Prevक्वारेन्टाइनमा बस्दा माया बसेपछि २ सन्तान र श्रीमान छोडेर क्वारेन्टाइनबाटै भागिन् अर्कोसँग (भिडियोसहित)
Nextपुजा र आकासको प्रेमदेखि बिहेसम्मको कुरा: आकाससँग छुट्टिने भन्दा पुजाको आँखामा आँशु(भिडियोसहित)
अञ्जली अधिकारीको तिज गीत ‘वर्ष दिन बितेको’ मा बबाल डान्स (हेर्नुहोस् भिडियो)
आज असार २ गते मंगलबारको राशिफल हेर्नुहोस्…
भारतमा यी व्यक्तिले लगाए सुनको मास्क, कति पर्यो मूल्य ? हेर्नुहोस्
सिंगापुरे लाहुरेसंग विवाह गरेको २ महिनामै सोनीको मृ’त्यु: प्रेमिलाइ अ श्लि’ल फोटो पठाएको आरोप(भिडियो हेर्नुस्)
बिवाह पार्टी हुँदाहुँदै दुलाहाले दुलहीको तलको कपडा उचालेर भित्र टाउको छिराएपछि (भिडियो सहित) (69717)